Brawl Stars 13.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 13.2 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Are you having problems? Visit http:supercell.helpshift.comabrawl-stars or contact us in game by going to Settings > Help and Support.
- ထိပ်တိုက်တွေ့ (တစ်ကိုယ်တော် Duo): ရှင်သန်မှုများအတွက်တစ်ဦးကစစ်တိုက် Royale စတိုင်ရန်ပွဲ။ သင့်ရဲ့ Brawler ဘို့ပါဝါ ups စုဆောင်းပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖမ်းပြီးသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော် play - ပြီးခဲ့သည့် Brawler သေး rowdiest စစ်တိုက် Royale ၌စိုက်နေသည်ကိုလိမ့်မည်။ ဆုရှင်အားလုံးယူပါ!
- ရန်ပွဲ Ball ကို (3v3): ၎င်းသည်တစ်ခုလုံးအသစ်ကရန်ပွဲဂိမ်းပဲ! သင့်ရဲ့ဘောလုံး ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြရန်နှင့်အခြားသောအသင်းတော်ရှေ့မှာနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်း။ အဘယ်သူမျှမအနီရောင်ကတ်များကိုဒီမှာရှိပါတယ်။
သငျသညျပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? http:supercell.helpshift.comabrawl-stars သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်က Settings> အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုသွားသဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
fsfret564 စတိုး04.4k
APK ဗားရွင္း 13.2
Release date: 2019-07-10 19:10:09
လက်မှတ် SHA1: 6E:74:D3:54:B2:6F:76:BF:04:91:EC:95:B0:2C:21:1D:20:13:F7:18
ထုတ်လုပ်သူ (CN): uejwsr
အဖွဲ့အစည်း (O): uejwsr
နယ်မြေ (L): uejwsr
နိုင်ငံ (C): uejwsr
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): uejwsr